भारत कसरी हाम्रो मित्र ? - Ujyaalo Nepal
एमसीसी सम्झौता संशोधन नगरे खारेज गर्न साझा पार्टीको माग
सुर्खेतमा १२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
भारत कसरी हाम्रो मित्र ?
By ujyaalo	 On May 24, 2020 41
ईण्डियामा अहिले गाईने ’जन गण मन हे भारत भाग्य विधाता’ भन्ने राष्ट्रिय गीत सन् १९११ मा बेलायतका राजा जर्ज पञ्चमको ईण्डिया यात्राको दौरानमा उनको स्तुतीका लागि कवी रवीन्द्रनाथ टैगोरबाट लेखाईएको गीत हो । त्यो भन्दा पहिले राष्ट्रिय गीतका रुपमा जनस्तरमा ’वन्दे मातरम्’ गाईन्थ्यो। ’वन्दे मातम्’ धेरै लोकप्रिय हुन थालेपछि ईष्ट ईण्डिया कम्पनीको सरकारले त्यसलाई विस्थापित गर्नका लागि राष्ट्रिय गीतका रुपमा ’जन गण मन हे भारत भाग्य विधाता’ स्तुती गीत लेख्न लगाएको थियो ।
जर्ज पञ्चम यो गीतबाट अति प्रभावित भएर भनेका थिए, ’वाह ! मेरो यति राम्रो स्तुती त बेलायतमा पनि भएको थिएन’। गीतबाट खुसी भएर जर्ज पञ्चमले यसै गीतका लागि टैगोरलाई ’नोवेल पुरस्कार’ दिने प्रस्ताव राखे । त्यसबेला उनी नोवेल पुरस्कार कमिटीका अध्यक्ष थिए । कमिटीले गीतमा पुरूकार दिने निर्णय गर्यो तर टैगोरले यो गीतले आफूलाई अप्ठारोमा पारेको हुँदा ’गीताञ्जली’ नामको कविताका लागि पुरस्कार दिईएको प्रचार गरिदिन अनुरोध गरेपछि त्यही प्रचार गरियो जबकि पुरष्कार ’जन गण मन’ लागि दिईएको थियो ।
यी दुई गीत मध्ये कुनलाई राष्ट्रिय गीत बनाउने भन्ने विवाद तात्कालिन नेशनल कांग्रेस पार्टीमा उठ्यो । नेहरुको परिवार अंग्रेजहरुसँग मिलेको थियो । त्यसैले जवाहरलाल नेहरुका पिताले जर्ज पञ्चमको स्तुतीका लागि बनाईएको गीतको पक्ष लिए । यसै विवादलाई लिएर कांग्र्रेस पार्टी विभाजित भयो र लोकमान्य तिलक, लाला राजपत राय सहितका नेताहरुले सन् १९४१ मा कांग्रेस पार्टी छोडे । कांग्रेस पार्टी तिलकहरुको ’गरम दल’ र नेहरुहरुको ’नरम दल’मा विभाजित भयो । अंग्रेजहरुले जवाहरलाल नेहरुका हातमा सरकार हस्तान्तरण गरेपछि सन् १९४७ मा राष्ट्रिय गीत कुनलाई बनाउने भन्ने विषयमा पुनः विवाद सुरु भयो।
ईण्डियाको तात्कालिन ’राष्ट्रिय विधानसभा’मा यसबारे बहस सदस्यहरुमध्ये ३१८ जनाले ’वन्दे मातरम’को पक्ष लिए भने जवाहरलाल नेहरु एक्लै ’जन गण मन’ को पक्षमा उभिए । अंग्रेजहरुले नेहरु बाहेक अरुको हातमा सत्ता हस्तान्तरण नगर्ने अडानमा रहेकोले गीतका बारेमा ३१८ सदस्यको मतले कुनै काम गरेन र जर्ज पञ्चमको स्तुतीका लागि लेखाईएको त्यही गीतलाई नै ईण्डियाको राष्ट्रिय गीत बनाईयो । ईण्डियन गुलामहरुले आज पनि जर्ज पञ्चमलाई भारतका ’भाग्य विधाता’ भनेर पुकारिएको यही गीतलाई राष्ट्रिय गीतका रुपमा गाईरहेका छन् । आजसम्म ब्रिटिश राजाको स्तुती गीतलाई राष्ट्रिय गीतका रुपमा गाउने यीनै गुलामहरुले नेपाल जस्तो सार्वभौम देशको अपमान गर्न खोज्छन् ।
मानवता र समाज विरोधी साम्राज्यवादको असली चेहरा